တမ်းပလိတ်:Taxonomy/PACMAD clade - ဝီကီပီးဒီးယား
Clade: Monocots [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Commelinids [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
en:Graminid clade|Graminid clade]]
en:PACMAD clade|PACMAD clade ]]
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် en:PACMAD clade အကြောင်း ဆောင်းပါးမရှိသေးပါ။ ဖန်တီးရေးသားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လက်ရှိ ကြည့်ရှုနေသော စာမျက်နှာတွင် en:PACMAD clade ၏ သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤနေရာကို အဘယ့်ကြောင့်ရောက်ရသလဲ သေချာမသိပါသလား? ဝီကီပီးဒီးယား taxonomy နှင့် စတင်လိုက်ရအောင်။
Parent: Poaceae [Taxonomy; edit]
Rank: clade (Clade အဖြစ် ပြသသည်)
Link: en:PACMAD clade
Taxonomic references: "A worldwide phylogenetic classification of the Poaceae (Gramineae) II: An update andacomparison of two 2015 classifications" (2017). Journal of Systematics and Evolution 55 (4): 259–290. doi:10.1111/jse.12262. ISSN 16744918.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Taxonomy/PACMAD_clade&oldid=543793" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။